ဗြိတိန် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာကို Like လုပ်မည့်သူ တစ်သန်းရှိလျှင် ၎င်းချစ်သူက လက်ထပ်မည် ဆိုသည့်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့ အကူအညီတောင်းခံ
ဗြိတိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာကို Like လုပ်မည့်သူ တစ်သန်းရှိလျှင် ၎င်းချစ်သူက လက်ထပ်မည် ဆိုသည့်အတွက် ၎င်း၏စာမျက်နှာကို Like လုပ်ပေးရန် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ Facebook အသုံးပြုသူများကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကယ်လီကော့စ်ဟတ်နှင့် ၎င်းချစ်သူ ပေါလ်မက်ပယ်လ်သော်ပီတို့ စေ့စပ်ထားသည်မှာ ၁၀ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ကော့စ်ဟတ်သည် သူမ၏ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကော့စ်၏ Facebook တွင် Like လုပ်သူ တစ်သန်းရှိပါက လက်ထပ်ရန် သဘောတူမည် ဖြစ်ကြောင်း ကော့စ်ဟတ်ချစ်သူက မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကော့စ်ဟတ်သည် I Need 1 Million People To Join For Paul To Marry Me C'mon Guys Help Me Lol စာ မျက်နှာကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Facebook သုံးစွဲသူများ ထံသို့ ဝေမျှခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ အဆိုပါစာမျက်နှာကို Like လုပ်သူ ၁၂၀၀၀ ထိရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ချစ်သူတိုင်းကို ဆုံစေချင်သာတော.အမှန်ပင်။ ခွဲးခွါခြင်းဆိုတာ အင်မတန်မှ ပူလောင်ပါတယ်။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ. လူတိုင်း ဘာမှ မခက်တဲ. ကူညီ မှုလေးကို လုပ်းပေးကြပါလို. တိုက်တွန်းစေချင်ပါတယ်။ ဒီလင်.လေးကတော. ကော့စ်၏ Facebook link ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကို http://www.news-eleven.com မှ တဆင်.ကူးယူဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ လေးစားစွာဖြင်. (မောင်မောင်)
Posted by မောင်မောင် at 11:24